Dagaalkii Badar: Qaybta 1aad – Wajibad
Dagaalkii Badar: Qaybta 1aad
Qaybta | 37aad
Dhinacii kale ninkii la oran jiray Abuu Sufyaan ibnu Xarbi, oo ahaa ninkii madaxda u ahaa safarkii qureyshee, oo aad u digtoon, ogna waddada uu hayo oo Badar sii martaa ineysan aamin ahayn wuxuu galay wareysi uu wareysanayo cid aala cidduu arko oo uu ku leeyahay “Madiina maxaad wax war aha ka haysaa?”, markaasaa ugu dambeyntii waxaa loo sheegay in Nabi Maxammed (scw) iyo asxaabtiisii ka soo baxeen Madiina iyagoo raadinaya safarkiisa.
Abii Jahal markuu hadalladaas yiri ayaa waxaa hadlay Akhnas ibnu Sureyq oo madax u ahaa reer banuu Suhra, wuxuuna yiri “haddii uu safarkii nabad galay aan laabanno”, markii laga diideyna ciidankii qabiilkiisa oo 300 gaarayey ayuu la laabtay, markii qureysh jabtayna qabiilkiisu aad ayey uga dambayn jireen, wayna jeclaayeen go’aankiisa. Sidoo kale waxa damcay iney laabtaan laftii uu Rasuulku (scw) ka dhashay oo awalba aan dagaal dooneyn ee lagu soo khasbay hase yeeshee Abii Jahal ayaa u diidey oo yiri “kooxdani nama cidlaynayso”. Dhinaca ciidankii muslimiinta waxaa loo soo gudbiyey in safarkii fakaday, ciidan aad u xoog badan oo Makka ka yimidna uu yimid isla markaasna aan laga fursan doonin in foodda la is daro, sidaa darteed koox ciidankii muslimiinta ka mid ahayd way dhibsatay xaaladdaas adag maxaa yeelay ciidanka muslimiintu hub sidaa ah ma wadan, dagaalna kuma soo talo gelin, Madiinana rag badan bay uga soo tageen, ujeeddada ay u soo baxeenna waxay ahayd iney soo qabtaan safarkaas qureysh. Kooxdaas siday u kahanaysayna Allaah ayaa qur’aanka ku sheegay oo wuxuu yiri:
” Siduu Rabbigaa kaaga bixiyey gurigaaga xaqnimo, koox mu’miniinta ka mid ahi waa kahanayeen xaqa ayeyna kugula doodayaan markuu cadaadey ka dib, waaba iyagoo dhimasho loo wado oo fiirinaya.” [Surat: Al-Anfaal, 5-6]
Rasuulku (scw) markii uu arkay xaaladdu meesha ay marayso iyo wadciga taagan wuxuu arrintii u bandhigay oo la tashaday asxaabtiisii si ay afkaartooda uga dhiibtaan arrintaas cusub. Abuubakar ayaa markaas istaagay oo si fiican u hadlay, ka dib Cumar binu Khadhaab ayaa hadlay oo bartii loo baahnaa taabtay. Miqdaad ibnu Camar ayaa isaguna hadlay oo yiri “Rasuulkii Allow ku soco waxa Rabbi ku tusay, annaguna waan kula jirnaaye.
Ilaahay baan ku dhaartaye kugu dhihi mayno hadalkii ay reer banuu Israa’iil Muuse ku yiraahdeen oo kale, kaas oo ahaa “soco adiga iyo Rabbigaa oo dagaallama, annaguna halkan baan sii fadhiyeynaaye”, laakiin waxa aan ku leennahay “soco adiga iyo Rabbigaa oo dagaaallama, annaguna la jirkiinna ayaannu dagaallmaynaaye. Allihii xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye haddii aad nala socotid ilaa aad ku gaartid Barkul-Qamaad, waan kula soconayna oo kula jiraynaa waxa ka sokeeya ilaa aad ka gaartid”.
Rasuulku (scw) wuu ku farxay hadalkaas wanaagsan ee ay soo jeediyeen saddexdaas nin ee Muhaajiriin kamid ahaa hase yeeshee wuxuu jeclaystay in uu Ansaarna go’aan kooda wax ka maqlo maxaa yeelay ciidanku Ansaar ayuu u badnaa isla markaasna heshiiskii ay Rasuulka (scw) la soo galeen ee Baycatu-Caqabadii 2aad kuma jirin duullaan dibadeed ee wuxuu ahaa difaacid cid kasta oo soo weerarta Nabiga (scw) iyo muslimiinta.
Rasuulku (scw) wuxuu yiri “dadyahow ii ishaara” oo uu ula jeeday hadla oo talo keena. Waxaa markaa fahmay hoggaamiyihii Ansaar calan koodana waday, Sacad binu Mucaad, wuxuu yiri “Rasuulkii Allow waxaa la arkaa in aad annaga (Ansaar) noo jeedid?”, markaas ayuu Rasuulku (scw) yiri “haa”.
Sacad ayaa yiri “waan ku rumaysan nahay waxaa aannu ka markhaati kacnay in uu xaq yahay waxa aad la timid, waxa aan ku siinnay ballantayadii in aan ku maqalno oo ku adeecno. Ku soco Rasuulkii Allow wixii aad doontid, Allihii xaq kugu soo saaray baan ku dhaartaye haddii aad badda nala aaddo oo aad dabbaalatid waan kula dabaalanaynaa, nin annaga naga mid ahina ka dib dhici maayo, mana kahanayo in aad nala kulansiisid cadowgayaga berri, waan ku sabirnaa dagaalka, waannuna ka run sheegnaa la kulanka, waxaana la arkaa in Allaah uu naga kaa tusiyo wax ay ishaadu ku qabowsato ee ku soco barakada Allaah”.
Riwaayad kale waxa ay ahayd in uu Sacad yiri “waxaa la arkaa in aad ka baqdid in Ansaari u aragto in aadan xaq ugu lahayn gargaar guryahooda difaacidooda maahane, waxaanse leeyahay, aniga oo Ansaar u hadlaya “meeshii aad doontid noo hogaaami, ciddii aad doontid xariggeeda xiriiri oo heshiis la samayso, ciddii aad doontid xariggeeda gooy, wixii aad doontid maalkayaga ka qaado, wixii aad doontid nasii, waxa aad naga qaadato ayaan ka jecel nahay waxa aad nooga tagtid, amarkayaguna amarkaaga ayuu raacayaa. Ilaah baan ku dhaartaye haddii aad socotid ilaa aad ka gaartid Qamdaan waan kula soconayanaa, Ilaah baan ku dhaartaye haddii aad badda noo bandhigtid oo aad gashid waan kula gelaynaa”.
Rasuulku (scw) markii uu hadalladaas iimaanku ka buuxo Sacad ka maqlay wuu ku farxay, waxa ayna ku dhalisay firfircooni, wuxuuna yiri “socda oo bishaaraysta, Allaah (subxaanahu wa tacaalaa) wuxuu ii ballan qaaday labo arrin midkood in aan ku guuleysanno (Safarka ama dagaalka). Ilaah baan ku dhaartaye waaba aniga oo hadda eegaya meelihii ragga (gaalada) meydkooda la dhig lahaa”.
Allaah wuxuu qur’aankiisa ku yiri:
” Xusuuso markuu Alle idiin yaboohay in ay idiin sugnaatay (aad ku guulaysaaysaan) labadii kooxood (ciidankii ama safarkii) midood, waxaadse jecaydeen in ay idiin ahaato midda dhibta yar, Allah-se waxa uu ogayaa in uu xaqa ku sugo kalimadiisa, oo gooyo ciribta gaalada.” [Surat: Al-Anfaal, 7]
Rasuulku (scw) ciidankii wuu ka raray meeshii uu deggenaa oo ahayd Dafraan, wuxuuna u kexeeyey Badar. Markii la marayo meel la yiraahdo Diyah oo Badar qarkeeda ah ayaa ciidanki degey. Rasuulka (scw) iyo Abuubakar ayaa ka dib sahay u baxay, markii ay dhexda sii marayaan ayey la kulmeen odey dadkii baadiyahaas degganaa ka mid ah. Rasuulka (scw) ayaa su’aal weydiiyey oo ku yiri “maxaad war ka haysaa dhinaca qureysh iyo dhinaca Maxammed (scw) iyo asxaabtiisa?”
Hase yeeshee odeygii wuxuu yiri “idiin warami maayo ilaa aad isku kay sheegtaan”, Rasuulku (scw) wuxuu ku yiri “waan isku kaa sheegaynayaa haddii aad noo warrantid”.
Odeygii wuxuu markaas yiri “waxaa i soo gaartay in Maxammed iyo asxaabtiisii ay soo baxeen maalinkii noocaas ahaa, haddii uu qofka warkaas ii sheegay run sheegay, maanta halkaas ayey joogaan. Qureyshna waxaa iga soo gaartay in ay soo baxeen maalinkii noocaas ahaa, haddii uu run sheegay qofkii warkan ii soo sheegay, maanta iyaguna halkaas ayey deggan yihiin”.
Odeygu wuxuu labada ciidanba ku sheegay goobihii ay kala degeen, markii uu hadalkii dhammaystayna wuxuu weydiiyey arrinkii uu sugayey oo ahayd in ay isku sheegaan cidda ay yihiin. Rasuulku (scw) wuu u sarbeebay oo wuxuu yiri “biyo ayaan ka nimid” oo uu ula jeeday biyo ayaa nalaga abuuray, ka dibna way iska dhaqaaqeen isaga iyo Abuubakr, odeygiina wuxuu lahaa “biyehee? ma biyihii Ciraaq?” oo wuxuu u qaatay dhul webi leh sida Ciraaq.
6 thoughts on “Dagaalkii Badar: Qaybta 1aad”